🥇 ▷ Xisaabaadka Instagram ee waraaqaha iyo ogeysiisyada ee qof walba la wadaagayo ✅
Xisaabaadka Instagram ee waraaqaha iyo ogeysiisyada ee qof walba la wadaagayo
Adigu ma waalan ama waalan. Adduunku sidoo kale. Waa uun fadhida oo si adag u garaacaya Sheekooyinka Instagram. Tanna waa in lala wadaago farriimaha u muuqda inay ku darayaan isbedelka xusuusta. Waxay noqon karaan kuwo jaceyl ah, qosol leh ama si fudud looga fekeri karo. Laakiin runtu waxay tahay inaysan joojineyn soo muuqashada ka dhexeysa koontada dadka aad raacayso. Ma rabtaa inaad ogaato halka ay ka yimaadeen? Si fiican u aqri
Isbeddelada ugu dambeeya ma aha qorista waraaqaha waraaqaha ama farriimaha oo u diraan si gaar ah. Waxay ka dhigaysaa mid dadweyne. Sidan ayaad u keydisaa warqad adiga oo qoraya farriin toos ah dusha sare baqshadda Ama wadaag ogeysiinta farriinta Soogalootiga cusub ee mobiilkaaga wareega, adigoon gelin wada hadalka. Miyay macno samaynaysaa? Midkoodna. Laakiin waxay leedahay qaab muuqaal badan. Haddiise farriintu qoto dheer tahay waxaan hore u haysannaa qaaciddada guusha. Si aad u badan sidaa darteed waxaa jira dhowr akoon oo Instagram ah oo ka faa’iideysanaya tan. Halkaan waxaan kuugu soo bandhigaynaa dhowr noocyo kale oo la heli karo.
Waa isbeddelka hadda socda. Waxay ka kooban tahay midna kama badna mana yarayn tusi farriinta soo socota shaashadda qufulka ama bilowga mobilada. Wax kasta oo naga tagaya ayaa raba in aan galno wada hadalka oo aan ogaano macnaha guud. Waxaa laga yaabaa in taasi tahay xanuunnada xisaabtannada ay ku guuleystaan. Waxa jira noocyo dhan, farriimo ka imaan kara wada sheekeysi kulul, ilaa farriin aad ka heli karto subaxa Isniinta shaqaalahaaga.
@notificacion_indirecta waa mid ka mid xisaabaadka soo saara qaabkan. Waxay kaloo leedahay waxyaabo badan oo kala duwen. Marka waxaad ka heli kartaa naftaada ogeysiisyo dhaadheer oo leh qoraalo qoto dheer iyo dareenno, fikradaha madadaalada si aad u hesho qof qof u soo jiitaan ama aad u raali geliso kuwa raacsan.
@new_notification wuxuu leeyahay xitaa taageerayaal badan, in kasta oo dulucdiisu ay aad ugu xirantahay jacaylka, weedho qurux badan iyo farriimo dareensan. Raac isla qaaciddada isla ogeysiinta ee ku saabsan dhammaan noocyada lacagta. Intaas waxaa sii dheer waxay sidoo kale daabacaan waxyaabaha ku jira qaab sheekooyin. Raac si aad u hesho farriimaha maalinlaha ah ee aad jeclaan lahayd inaad hesho.
@ ogeysiisyada .kadib, maadaama aysan jirin labo seddex la’aan, koontadaani wuxuu la mid yahay waxa lagu arkay isbeddelladaan. Ku xir shaashadaha asalka iyo waqtiga si aad ugu ekaato in farriintu dhab tahay. Waxa kale oo ay ku dhowdahay jaceylka iyo jilicsanaanta, in kasta oo ay jiraan waxoogaa wax walba. Farriimaha ay had iyo jeer la socdaan muusigga emoji-ga, xiitaa haddii aysan waxbadan ku lahayn.
Maxaad warqad ugu soo uruurisaa baqshad goorta aad u gudbineysid dhambaalkaaga dadka oo dhan? Si fiican uma garanayno sababta, laakiin isbeddelkan waxay leedahay awood muuqaal xad dhaaf ah. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah mawduuca si toos ah loogu qoro baqshado midab leh oo dhalaalaya. Laga yaabee inay tahay qaylo-dhaan, ama farriin macno leh. Xaqiiqdu waxay tahay inay jiraan dhowr akoon oo bixiya nuxur si markaa aad ugu wadaagi kartaan adoo adeegsanaya cinwaankaaga gaarka ah ama sheekooyinkaaga Instagram
@sobresratchet waa koonto xoogaa hooligan ah. Farriimihiisu waa jillaab iyo xoog. Aragga iyo Seminis ahaan labadaba. Waxaa laga yaabaa inaan ku leeyahay qayb kamida guushiisa. Koontadaada waxaa ka buuxa sawiro baqshado wata oo leh farriimo dhowr sadar ah. Laakiin isha ku hay, qaar baa toos toos ugu taga wadnaha, qaar kalena maskaxda bay u galaan. Meel wanaagsan oo tilmaamaha iyo fariimaha aan la qarin.
@anhqv_sobres Xaaladdan oo kale koontada ayaa laf-dhabar u ah lafteeda. Halkii ay ka ahaan lahaayeen farriin qoto dheer ama dib u habeyn ah oo lagu qoro baqshadaha, waxaan kala soo baxnay weedho ka socda taxanaha telefishanka weyn Halkan Halkan Ka Dhageyso Ma Jiro Cid Ku nool. Haddii aad taageere u ahayd taxanaha, ha ilaawin inaad raacdo si aad ula wadaagto oo aad u xasuusato daqiiqado waaweyn. Laakiin leh qaab casri ah.
Warar kale oo ku saabsan… Instagram